Basa rekuchengetedza muDubai G4S, World Security Apply nhasi
Ruzivo urwu rwunotumirwa Kugara pane yedu Webhusaiti!
Unyanzvi & Kugadziriswa - Yakaparadzaniswa neComma (maneja, mutengesi, mainjiniya)
Aya ndiwo mazwi ako akakosha padhayeti, ndosaka vateresi vakuwana uri online
Basa rekuchengetedza muDubai kune Vanotarisira Basa
Ndinoda visa ye Dubai here?
Mabasa mu dubai eAlgeria
Security mabasa mukati Dubai uye muUnited Arab Emirates. One of the hottest topics for job seekers. If you are searching for employment. The kuchengetedza mabasa muDubai inogona kuve sarudzo yakanaka kwauri. Kune rimwe divi, kambani yedu iri kutarisira kukubatsira. Tiri kubatsira vashandi vemabasa kubva kumativi ose enyika. Kunyanya kubva kuSouth Africa uye India work seekers in Dubai uye neVaPakistan vatsva vadzo.
Dubai City Company nguva dzose kupa ruoko nekutsvaga basa. Titi yedu nguva dzose utungamirire vanotsvaka basa kutsvaga mabasa ekuchengetedza muAU. Isu tine tariro, kuti nyanzvi yedu timu inokwanisa kukubatsira iwe panguva yekutsvaga basa. Muguta reDubai, iwe unogona kuve nemakambani mazhinji kwazvo nyanzvi. Kutsvaga mabasa nemakambani akadai seG4S, Hawk Security, cyber Security uye vamwe Dubai Security Companies.
Nokudaro izvi mupfungwa, iwe unofanira kunyatsoedza isu complete guide pamusoro pekuwana sei kuchengeteka mabasa mu Dubai. Kambani yedu ndiyo inonyanya kukosha makambani maunofanirwa kuisa zvakare. Parizvino muDhaibha uye Abu Dhabi, pane zvakawanda vapfumi vapfumi nokuti chibatiso mabasa in Dubai ?.
Zvechokwadi muUAE ndey kuwedzera mushamba wezvinhu zvepamusoro. Uye neiyi chete inouya kuVIP persona. Zvakare, iyo iri kukura musika ndeye bhizinesi idzva. Zvakare neVIP hunhu, uye vanhu vebhizimusi repamusoro. Vese vevanhu avo vari kuda varindi vekuchengetedza.
Kune akawanda nzira dzekuwana basa. Kunyanya kana tikakutungamirirai kuUnited Emirates. Vatorwa vatsva vanozoshanda vanogona kutarisira zvikomborero zvakawanda. Imwe yemuenzaniso ibasa rakasimba mu Dubai Airport security. Kana iyo kambani nyowani ichashandisa kambani yeDubai. Ivo vachamupa iye chibvumirano chakanaka chenguva refu.
Chii chandinofanira kuva murindidzi?
Kuti uve chengetedzo yekuchengetedza muDubai. Unoda kuve neizvozvo zvimwe zvezvikwaniriso uye ruzivo. Vanochengetedza varidzi achida kushanda muEmirates. Hazvina mhosva kana vari vemo vashandi kana vatorwa vokunze. Vose vanofanira kuenda nekupedza svondo-refu iyo inobatanidza maawa e36 ekudzidzisa uye maitiro anobatsira. I Dubai Police Academy inotarisira 3 matanho echikwata chacho. Simba renharaunda inozoedzwa muongororo mitatu.
Iyo yemuromo paunoda kupindura mibvunzo. Ipapo unenge uchinge wanyora bvunzo uye ruzivo runoshanda bvunzo. Tarisa tarisiro pamazano nzira yekupedza muedzo pano. Uye kana a mukana wokubudirira ichapedza miedzo yose ye3. Bhuku rekuBritain rekudzidzisa mashizha City neGuilds zvirokwazvo richakupa chiremba chekupa chiremba chekubvumirwa kuti uve muchengeti.
Thes 3 zvirongwa zvinosanganisira makirasi ekuongorora kwemhosva. Nzira yekushandisa kuchengetedza chinangwa chekushandisa. Nzira yekugadzirisa kupisa moto uye kutsvaga motokari uye nzvimbo. Pamusoro pezvakanaka zvekuchengeteka jobs in Dubai. Paunenge uchidzidza kudarika 50 muzana yezvezvidzidzo zvinoshanda. Saka kwete chete iwe unozoziva kuti ndiani unofanirwa kuve muchengeti. Asi iwe uchadzidza kuzviita nenzira kwayo.
Chii chandichadzidza kana ndichigadzirisa basa rekuchengeteka?
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvinodiwa nevadzidzi. Kazhinji kutaura ndiyo nzira yekufamba nayo nayo vatengi vebasa kushandiswa kwemabasa. Nekuti pamagumo emugwagwa kwete chete manejimendi anofanira kuziva uye maitiro ekuchengetedza vimbiso. Iwe unofanirwa kudzidza maitiro ekuzvibata iwe nevamwe munjodzi. Zvinhu zvinomiririrwa nemudzidzi kudzidza kekutanga nzira yekuchengetedza nzvimbo yematsotsi. Padivi rakanaka, icho chichava chidzidzo kubva kumapurisa Mapazi. Chero bedzi ruzivo rwekuti ungatsvaga sei kuisirwa kana mota. Munhu mukuru ari kudzidzisa iInternational Center ye Kuchengeteka uye kuchengeteka kuDaily Police Academy.
Dzidzo dzose uye makirasi anopiwa nevakuru vakuru vemapurisa. Saka iwe unofanira kuita zvakakodzera. Uyezve, unofanira kuziva nzira yekugadzirisa nayo muGulf makambani. Mamwe makambani, semuenzaniso, achiwana varairidzi kubva kune zvimwe Hurumende uye nezvimwe zvine chekuita nezvekutengeserana zvakadai se Civil Defense. Padivi rakanaka, zvese izvi zvichaitika kudzidzo. Zvemabasa ekuchengetedza muDubai, makambani akati wandei ari kumisikidza yavo yekudzidzira makosi. Padivi rakashata, bvunzo dzinofanirwa kutorwa kuchikoro.
Iyo chirongwa chedzidzo chakazara chakaunzwa muDubai uye Abu Dhabi mu2005. Asi chikuru bhizinesi ratanga kumhanya mu2008. Parizvino, iyo academy yakadzidzisa nezve 57,000 yekuchengetedza vashandi. Iyi purogiramu yakagadzirirwa nenzira iyi kuti vazhinji vevanhu vanoizoipfuura. Saka haufanirwe kunetseka zvakanyanya pamusoro peizvozvo. Chikamu chakapfuura chinopfuura 80%.
Ndeipi mubhadharo wemurindi mu Dubai?
Izvo chaizvo zvinoenderana,mamwe emabasa ndeAED1,000 pamwedzi kusvika ku8,000. Uye ipapo nepfungwa, iwe unofanirwa kuve nekutarisa kuchengetedzwa kwemabasa ekuchengetedza. MuUnited Emirates, izvi zvose zvinotarirwa nevanoshandisa vanaani. Chivako chipi chauri iwe iye zvino chiri kutarisira ?. Kuti uwane zvakawanda, unogona kubvunza zvimwe zvitsva kubva kuDhaibha neAud Dhabi. Imwe yenzira dzakanakisisa dzekuziva ndeyekuti bvunza vamwe nezvemaripo. Nokuda kwako iwe hauzivi zvachose kusvikira iwe uchitsvaga chaiye.
Kutsvaga mabasa ekuchengetedza muDubai kutora nguva. Mwero kutsvaga basa kuri kutora nguva. Kunyangwe iwe uchaedza zvakadii. Muzhinji, zvinotora zvakatenderedza 6months. Iyo nguva yauchazoshandisa muUnited Arab Emirates. Zvinogara zvichirwira iwe, zvikurukuru kune vanoenda kune dzimwe nyika kunze kwenyika.
SeSecurity Guard, unogona kutarisira mubairo wekutanga. Ukuwo neruzivo rwako rwakanaka, unogona kubata muhoro wakanaka chaiwo. Semuchengeti wevanzika wekuchengetedza VIP, unogona kubata pamusoro pe550 kusvika ku1,500 AED pazuva. Padivi rakanaka, haudi kugadzirisa zvikwereti zveMBA.
Nzira yekuwana kuchengeteka sei muZimbabwe?
Makambani akati wandei ava kunyorera Dubai. Sezvineiwo, zvedu kambani ine mabasa inowanikwa muDubai uye Abu Dhabi. Kunyanya kune vatariri vemasuo uye VIP vachengetedzi vabatsiri. Kazhinji kutaura muAud Dhabi uye Dubai iwe unogona tsvaga makambani akawanda ari kupa mikana yakanaka kuvanhu vakarurama. The kutevera makore kunoratidza kukura kukuru kwemashamba ekuchengetedza muMiddle East.
Padivi rakanaka, vazhinji mabasa ekuvhara ari kutanga show. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Emirates yakafambira mberi pamwe nekubhinywa kwevarindi vekuchengetedza ve Expo 2020 mabasa. Mazuva ano GCC dunhu iri kutanga kutanga kubata zvakanaka kwazvo mabasa ema expats. Kunyanya na makambani muAud Dhabi uye Dubai. Zvakare, iyo expo 2020 iri kufamba uye makambani matsva akatanga zvirongwa zvakasiyana zvevatorwa. Kune rimwe divi, iwe unofanirawo kutarisa makambani ekubhadhara. Careerjet website ye Dubai uye Monster Gulf jobs website. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Bouncer basa mu Dubai
Mabasa ekuchengetedza muDubai seBouncer ndiwo anonyanya kufarirwa. Dubai city kambani inopa yakazara yakazara yemabasa ekuchengetedza muDubai. Saka, uine izvi mupfungwa, timu yedu iri kutonga tsanangudzo yakajeka pamusoro pokuti ungawana sei basa as a security person in Dubai. Have a look yourself how to find employment in the security sector. Because of the Dubai kuchengetedza varindi, basa uye mubhadharo zvakanaka kwazvo muUnited Emirates Emirates.
Basa rakakosha muUAE rakabhadharwa kazhinji munguva dzakawanda. Asi iwe unoda kuva neruzivo rwakanaka. Uyezve kutarisa zvakanaka uye kudzidzisa kuenda kumitambo. Nokuti dzimwe dzevhisikiti usiku United Arab Emirates kutsvaga rubatsiro. Kunyanya kubva kumakambani ekuchengetedza ekunze. Chimwe chinhu chikuru nebasa iri ndechekuchengetedza pfuma yekambani. Kubatsira vashandi vemuno nekuchengetedza nharaunda yakachengetedzeka kwenguva yakati.
Semubhadharo, hausi kuzova wevamwari. Chero bedzi iwe uchaita zviri pamutemo kusajeka kwekudzivirira. Iwe unofanirwa kuve neshuwa, iwe uno chengetedza runyararo rwekuchengetedza hupenyu uye yako pfuma kuchengetedzwa nguva dzese. Iyo bouncer inotora zviitiko zvechokwadi zvevatengi vasina kufungidzirwa. New mishumo inofanira kupihwa zvakadzama kune chero chiitiko chinofungidzirwa mune zviitiko mumakirabhu. Uyezve, nzvimbo yekutarisa zvisina mwero kana kugara uchivaka uye zvivakwa.
Pamberi pechikwata, ichavharwa. Vakawanda vebounced basa mu Dubai inosanganisira kuongorora nekudzora kupinda kwemavakwa ekuvaka nemasuo emota. Munguva yehusiku, basa racho rinogona kunge risina kuchengetedzwa. Asi vamwe varindi vanochengetedza vatarise alarm system paCCTV. Uye mazhinji emakamera uye anoshanda system achakutarisa 24h pazuva rekuona mamiriro ekukurumidzira.
G4S yakanakisisa yekuchengetedza basa muUAE
Iyo G4S ndiyo kambani inotungamira yepasi rose mune yekuchengetedza nyika. Imwe ye mhinduro dzakanakisa dzevakadzingwa. Uyezve, ivo ndevamwe vevashandi vakuru vepasirese pasirese. Iyo G4S ndiyo imwe yekambani yakanakisa mu Middle East yekushanda. Iyo zvakare inonyanya kuita kambani G4S paForbes ranking.
Kambani yeG4S inopa zvakawanda zvakabatsirwa. Kubva mubhadharo wekutanga uye bhonasi kubhadhara kune vashandi vavo. Kana iwe uri kutsvaga huwandu hwakawanda hwezvinhu zvinonakidza, zvinokomborera uye kwenguva refu yemikana yemabasa. G4S Company ndeyako. Rimwe ra nzvimbo dzakanakisisa dzebasa renguva refu muUAE. Iyi ndiyo kambani iyo iwe unogona kunyatsoita mutsauko mukuchengeteka career in Dubai.
Mumabasa ekuchengeteka mumusika we Dubai. IG4S nzvimbo yakanaka kune iwe zvikurukuru kana uri kutsvaga kune dzimwe nyika mabasa vacancies. NeG4S iwe hauzozowani zvakasiyana-siyana uye zvakasiyana-siyana zve mikana yemabasa chero kupi zvako nemamwe makambani.
Another anofarira kambani ndeyokutanga Chengetedzo Boka. Iyi kambani zvine simba vanoziva kuti Middle East kubudirira. Chekutanga boka rekuchengeteka rinowanzoenderana nekubhadhara vanhu vatsva. Iyo yakasimba ndeyokutenda uye kukudziridza hurongwa hwose. Vamwe vezvitsva zvinoshanda pamwe iyi kambani uye kuchinja simba rekuchengeteka mu Dubai. Saka kana uri kutsvaga kuchengetedza mabasa mu Dubai. Chekutanga chekuchengetedza boka rinotarisira vanhu vakakurumbira. Uye uve umwe wavo kunyange sekutsva kwekutsva kwakakosha chaizvo.
Chekutanga boka rekuchengeteka rine basa rakakosha zvikuru. Batsira Middle East Nokuti iyo yakasimba ndeyokupa nzvimbo inoshanda. Neiyi kambani, unogona bata zvido zvebasa remunhu. Vazhinji vevashandi vanowedzera hunyanzvi hwavo uye vanokurudzira kukura kwavo vega. Kuchengetedza kwekutanga boka reboka rinowanikwa zvikuru muDhaibha. Uyewo, zvirongwa zvekuvandudza zvinotsigirwa mukati memisika zhinji muUAE.
Kambani iyi inoshanda zvakanaka kuti vaone kuti vatariri veUAE vanochengetedzwa. Iwo ekutanga mapoka ekuchengetedza anova ari-epasi rose kambani mukati mekudzidziswa uye zvitsva zvivakwa. Panguva imwe, ivo vanowanikwa kune vese vatsva vanhu mukati iyo kambani uye vashandi vatsva. Vaya vanotarisira zvibvumirano zvakasiyana-siyana musangano. Nechinangwa chekutarisira zvibvumirano zvekuchengetedzwa muUAE, kambani inoita kuvashandi vavo nzira itsva yekuvandudza mabasa avo. Kusvikira kumagumo, kambani iyo inonyanya kufara nekambani yedu tsika.
Ndapota email tsamba yedu HR inopinza kopi yeCV yako info@firstsg.com.
KuHawk Security Services, imwe kambani inoshandira muUAE. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Mikana yebasa yakazarurirwa kune vatsva vanoenda kunyika. Nzvimbo yekambani iyi iri muUnited Emirates. Akanaka chaizvo kambani kuzoshanda sekutsvaga. Nekuti iyo kambani ine yakasarudzika nzira uye akasiyana nzira. Kunyanya kune mushandi mutsva muDubai, Sharjah uye Abu Dhabi.
Kambani yakachengeteka yekambani ine nzvimbo yakasiyana nzvimbo munzvimbo dzeUAE. Mukudaro akawanda evashandi muUnited Arab Emirates ichitsvaga basa muDubai. Kazhinji kutaura, kana iwe uri vanoda kufarirwa nemumwe wevashandirwi vekuchengetedzwa kwemabhizimisi. Kambani yekuchengetedzwa kweHawk ichakwanisa kukubatsira nekuzvidzivirira iwe sechirongwa chekuchengeteka.
Kune zvakanaka zvakawanda iwe zvaunogona kuwana kubva ku Hawk kuchengetedza kambani. Sezvo iwe uchijoinha rovedzo uye tanga kukura iwe pabasa rako uye izvi zvakasimba. Zvechokwadi, iwe uchazviwana uine chirongwa chakanaka chekuita. Iwe unofanirwa kuuya uye ubatane neHawk Security Services muUnited Emirates. Saka kambani iyi iri Zvakanaka chaizvo kuti uende kuArabic.
Tumira rutsigiro rwako Email: hr@hawksecurityservice.com
Chengetedza Simba Rekuchengetedza
The Guardforce Security Services inopa hutano hwakasiyana-siyana hwekuchengetedza. Iwe unogona kuiswa panzvimbo yekuchengeteka kwako basa mu Dubai kana Abu Dhabi. Kazhinji, Guard Guard Security Service iyo yakabvumidzwa neDubai Police department reDziviriro System (DPS). Iyo kambani inovavarira kuti uve mukurusa muUnited Arab Emirates. Na Guard Force Kuchengetedza iwe unogona kuva nebasa semushandi kana mutariri.
Pakaipa, iwe uchienda kumusangano nekambani iyi. Iwe unoda zvinosangana nezvinodiwa zvishoma kuti uve mushandi. Varindi veMasvingo ekuchengetedzwa kwehurumende vane maInternet uye vatengi vemunharaunda kubva kuUnited Emirates. Iwe unogona kuva nemukana webasa mukati a maindasitiri akasiyana-siyana. Mukufamba kwenguva, iwe unogona kusarudza kubva kutengesa, mari kana kunyangwe basa nekuchengetedza dzidzo. Kusvikira kunguva iripo, iyo ikambani inobhadhara zvekugamuchira vaeni makambani. Pamberi pepamusoro, mamwe makambani ekutengeserana nemakambani emabhizimisi akashanda pamwe neWarrior Force Security Service.
They are also hiring for CCTV mabasa muDubai
Heino chibatanisiro chaunofanira kubhadhara http://guardforce.ae/career/
Dubai City Kambani ikozvino ichipa nhungamiro dzakanaka dzeMabasa muDubai. Dare redu rakasarudza kuwedzera ruzivo rwemutauro mumwe nomumwe wedu Dubai expats. Saka, uine izvi mupfungwa, ikozvino unogona kuwana vatungamiriri, matipi uye basa muUnited Arab Emirates nemutauro wako.
Tumira Chinyorwa & Batanidza kwatiri!